Ku beddelashada Iibintaada Qaab Wajiyo Badan | Martech Zone
Waxaa laygu casuumay inaan kaqeybqaato dood cilmiyeed dhowaan kadhacday shirkii Waxsoosaarka Iibinta ee Ururka Maamulka Maareynta Iibka ee Atlanta. Kalfadhigu wuxuu diiradda saarey Is-beddelka Iibka, iyadoo ka-qaybgalayaashu ay dhiibanayeen fikradahooda iyo fikradahooda ku saabsan dhaqamada ugu wanaagsan iyo arrimaha guusha muhiimka u ah
Mid ka mid ah qodobbadii ugu horreeyay ee dooddu waxay isku dayday inay qeexdo ereyga laftiisa. Waa maxay isbeddelka iibku? Miyay si xad dhaaf ah u badan tahay oo macquul tahay in la buunbuuniyo? Isfahamka guud wuxuu ahaa, si ka duwan waxtarka iibka ama karti-siinta, taas oo leh sharraxaad ballaadhan iyo fasiraad ballaadhan, is-beddelka iibku wuxuu wax u dhimayaa dib-u-habeynta shirkadda iibka iyo isbeddelada yar ee kordhinta si loo hagaajiyo waxqabadka.
Waxyaabaha macnaha guud ahaan wuxuu saameyn ku yeelan doonaa wejiyada badan ee ururka, oo ay ka mid yihiin:
Istaraatiijiyadda suuqa loo aado (kanaalada, suuqgeynta, wax soo saarka, qiimaha, dadka dhagaystayaasha ah)
Kaabayaasha taageeraya (iibka iibka, geeddi-socodka, tikniyoolajiyadda)
Waxyaabaha la xiriira dadka sida iibinta xirfadaha iyo qorshooyinka shaqaaleynta
Xaaladaha badankood, mashaariicda is-beddelka waxay gaarayaan illaa 1-2 sano oo dadaal waxayna u bandhigi karaan urur qatar aad u badan oo howsha ah. Tusaale ahaan, inta ururku ku socdo isbeddel, weli waxaa loo haystaa inay la kulmaan ujeeddooyinka saddexdii biloodba mar. Ka fikir sida inaad isku dayeyso inaad bedesho taayirrada gaadhigaaga intaad weli wado. Arrin kale oo shirkado badani la kulmaan mashaariic sannado badan socotaa waa suurtagalnimada darawallada ganacsiga ee salka ku haya isbeddelka isbeddelka, taasoo ka dhigaysa natiijooyinka mid aan khusayn!
Maxaa dhab ahaantii keena isbeddelka ka dhex jira hay'adda iibka?
Gudigu wuxuu si ballaadhan u aqoonsaday laba arrimood oo asaasi ah oo ka dambeeya isbeddelka: dibedda iyo gudaha. Waxyaabaha dibedda ka mid ah waxaa ka mid ah waxyaabo ay ka mid yihiin isbeddelada xagga iibsiga, isbeddelka tikniyoolajiyadda iyo soo-galootiga cusub ee tartamaya. Alaabooyinka cusub, isku darka iyo la wareejinta iyo isbedelka maamulka ayaa matalaya isbadalada gudaha. Gudiga ayaa isku raacay in isbeddelada ku dhaca hab dhaqanka iibsadaha ay yihiin waxyaabaha ugu badan ee kiciya isbedelka.
Isbedelka dabeecadda wax iibsiga waa astaamaha:
Helitaanka macluumaadka ee iibsadayaashu
Ka-qaybgal ballaaran oo daneeyayaasha go'aannada ganacsiga (oo inta badan la isku raacsan yahay)
Kooxaha wax soo iibsiga oo aad u firfircoon
Iibsadayaashu waxay kordhinayaan rajooyinka iibiyeyaasha marka laga hadlayo ka faa'iideysiga khibradooda iyo khibradooda si loo dardargeliyo natiijooyinka ganacsiga
Qaar badan oo ka mid ah ururada iibka, qaadashada isbeddelka iibka ayaa ah weydiin weyn. Si kastaba ha noqotee, waxaan ka hadleynaa wax ka beddelka habka iibinta iibka, taas oo macnaheedu yahay in la beddelo dabeecadaha iibinta ee qoto dheer. Tani way adkaan kartaa in la bilaabo oo xitaa way sii adkaan kartaa in la sii wado. Haddii aad tixgeliso isku daygii hore ee ahaa inaad ku beddesho isbeddelka hay'adda iibka (laga yaabee iyada oo loo marayo barnaamij tababar ama soo bandhigida tiknoolajiyad cusub, mid ka mid ah sababaha ugu badan ee ay u fashilmaan waa sababta oo ah korsashada iibinta liidata.
Maxay xoogagga iibku u qaadanaynin tiknoolajiyad?
Sababtoo ah in yar oo ka mid ah hogaamiyaasha iibka ayaa isku dhiibaya kabaha iibiyaha iibiya waxayna ka jawaabaan su'aasha Maxaa aniga iigu jira? Haddii iibiyaha iibku uusan u arkin qiimaha tooska ah ee beddelaadda habka ay u ganacsanayaan, waa waqti uun ka hor inta aysan ku laaban caadooyinkii hore.
Tani waxay la socotaa gacan-ku-rumeysi aaminaad kale oo xoog leh oo badanaa la iska indhatiro: maareeyaha iibka ayaa qayb muhiim ah ka ah xalka. Maamulaha iibka waa inuu lahaadaa karti iyo qalabayn si uu ula xiriiro una xoojiyo isbedelada la hirgalinayo. The sababta yacni dhiirigelinta ganacsiga ee ka dambeysa isbeddelka ayaa ah qayb muhiim ah.
Laakiin halkan waa xoqidda. Xitaa haddii wakiilka uu fahamsan yahay dhiirrigelinta, haddii isbeddelka akhlaaqda ay aad u adag tahay in la milmo oo la cuno - ha noqoto buuxinta qorshooyinka koontada, cusbooneysiinta nidaamka CRM ama raacitaanka habraac ka duwan - waxay noqon kartaa wax sii sheegid is qancin ah adigana dib ugu noqo afar gees ka hor intaadan ogaanin. Tani waa mid ka mid ah sababaha loo soo sheegay in 87% dhammaan aqoonta lagu bixiyo barnaamij tababar la ilaaway ama la iska indhatiray 30 maalmood ka dib.
In tan la sii daro, waligeed hal-cabbir kuma habboon tahay dhammaan dhacdooyinka. Codsiga hanaan kasta, barasho, ama tiknoolajiyad waa gebi ahaanba xaalad. Way adagtahay. Sideed ula macaamilaysaa daneeye kasta si macno leh? Wadahadalka waxaa saameyn ku leh:
Cidda aad ka iibinayso
Waa maxay waaxda warshadaha
Si wax looga qabto shuruudaha ganacsi ee loo baahan yahay
Ka soo horjeedka waxa tartamaya (yada)
Muxuu hogaamiyaha iibku sameeyaa?
Ma jiraan xabad-qalin ah. Nidaam isku dhafan oo badan ayaa ah kan ugu fiican. WAA INAAD waxbartid, WAA inaad tabobartaa, WAA inaad hirgelisaa habab cusub oo aad keentaa waxyaabo cusub, WAA inaad siisaa qalab cusub, hagaajinta dhulalka iyo qorshooyinka kombiyuutarka, iwm. Laakiin go'doominta maalgashiyadan waxay halis ugu jiraan inay keenaan ROI la filayo. . Waa in lagu qabtaa riwaayad. Tababbarka oo lagu xoojiyay tababar wax ku ool ah. Nidaamka ay taageerayaan nuxurka iyo aaladaha wax ku oolka ah. Dhammaantoodna waa la waafajin karaa si loo hubiyo in wakiillada loo habeeyo qaabkooda xaalad kasta oo iib gaar ah.
Tags: dhaqanka iibsigaisbeddelada kordhintaKordhinta Iibkawaxqabadka iibkadib u habeynta iibkaistaraatiijiyada iibkaisbeddelka iibka
vCita: Balanqaadyada, Bixinta, iyo Xariirka Xiriirka ee Goobaha Ganacsiga Yaryar
AllGraduates Tarjumaadda & Adeegga Afcelinta
Oktoobar 12, 2014 at 2:11 AM
Iibinta, runti wax badan ayey ku xiran tahay inaad ku xirnaato suuqaaga bartilmaameedka oo aad ka dhigto macluumaad muhiim ah oo loo heli karo iyaga xitaa marka ay jiraan xaddidaadyo ku saabsan isgaarsiinta. Adoo u diraya fariintaada dhagaystayaashaada, waxaad fursad fiican uheli doontaa ROI.